Baarlamanka Soomaaliya oo loo qeybiyey miisaaniyadda 2014 * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A A warsame	 Last updated Apr 4, 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Xildhibaannada baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta loo qeybiyay miiisaaniyad sanadeedka 2014, taasoo dhawaan golaha wasiirradu meel mariyeen.
Kulanka baarlamaanka maanta oo ahaa kaldhiga 4-aad fadhigiisa 1-aad oo uu shirguddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa waxaa soo xaadiray 144 mudane.
Guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo hadal kooban ka jeediyay furitaankii kaldhiga ee maanta ayaa sheegay in mudanayaashu ay horyaalaan howla aad u fara badan, islamarkaana xildhibaanada looga fadhiyo inay shaqeeyaan waqtiyo dheeri ah.
Markaas kadib waxaa xildhibaannada loo qeybiyay miisaaniyadda sanadkan 2014-ka oo ay dhawaan meel mariyeen golaha Wasiirada, iyadoo miisaaniyaddan ay aad uga badantahay miisaaniyaddii hore, kuna kacaysa qiimo gaaraysa $218,450,743 dolar, isagoo gudoonka xildhibaannada u sheegay sida uu qabo xeer hoosaadka in ay ku soo akhristaan muddo 24 saac ah, kaddibna ay talooyinka soo gudbin doonaan.
Jawaari: Baanka Dhexe lagama bixin karo lacag uusan Golaha Shacabku amrin